इन्धनको अभाव : भारतको दादागिरी कि निगमको कालोबजारी ? - Suvham News
इन्धनको अभाव : भारतको दादागिरी कि निगमको कालोबजारी ?
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी फुकुवा भएको हप्तौँ वितिसकेको छ । भारतसँगका सबै नाकाहरु विनाअवरोध सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर पनि, ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा सहजता आउन सकेको छैन । भारतीय पक्षले मधेस आन्दोलनको समाप्तिसँगै नाकाको अवरोध हटेपछि आपूर्ति सहज गराउने प्रतिवद्धता गरेको थियो । यद्यपि, नेपाललाई इन्धन बेच्ने एकमात्र संस्था भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको भारत भ्रमणपछि मात्रै मागअनुसार इन्धन दिन सक्ने संकेत गरेको छ । कारणका रुपमा भने आईओसीले विगतका दिनहरुमा जस्तै माथिको आदेश नपाएको नै बताएको छ ।
यता, आयल निगमले गत सातादेखि नै सबै सवारी साधनलाई सहज रुपमा तेल उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो । निगमको सो सूचनाले उपभोक्ताहरुमा खुसी छाएको थियो । यद्यपि, सो खुसी एक दिनपनि टिक्न सकेन । किनकि, निगमको सूचनालाई आधार मानेर भोलिपल्ट पम्पमा पुगेका उपभोक्ताले सोही सास्ती खेप्नुपर्यो–दिनभरि लाइन अनि साँझमा रित्तो हात लिएर घरतिर । त्यस्तै, नाकाबन्दी खुलेपछि भरि सिलिण्डर ग्यास पाइने आशमा बसेका उपभोक्ता पनि निराश बनेका छन् । भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धमेन्द्र प्रधानले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेसँगको भेटमा मागअनुसारको ग्यास लगायतका इन्धन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, उनले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गरेनन् । यसकारण, भारतले फेरि पनि नेपाललाई झुक्याएको अनुभव नेपाली जनता तथा उद्योगीहरुले गरिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा दैनिक ६० बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिने गरेकोमा केही दिनयता ४२ बुलेटसम्म भित्रिएका छन् । यद्यपि, रिरुट र नाकाबन्दीअघि नै लोड भइसकेका बुलेट सहित गरेर सो परिमाणमा ग्यास भित्रिरहेको छ । लोडिङ भने निकै न्युन रहेको जनाइएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका अनुसार, इन्धन आयात बढेपनि मागको आधामात्रै आइरहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर रु ५५ घटाएको छ । निगमले आन्तरिक उडानतर्फ रु १६४.८८ रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अब रु १०९ मा झारेको छ । तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन आयातमा समस्या भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रको पेट्रोलिमेक्स र नेपाल वायु सेवा निगममार्फत ढुवानी गरी नाकाबन्दीको समयमा हवाई इन्धन महँगोमा खरिद र महँगोमा बिक्री गर्दै आएको थियो । नाकाबन्दीको समयमा आयल निगमले रु १६४.८८ प्रतिलिटरमा बिक्री गर्दै आएको हवाई इन्धन आयल निगम व्यवस्थापनले रु १०९ कायम गरेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाईसमेत निगमले इन्धन उपलब्ध गराएको छ । यसअघि नाकाबन्दीका समयमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडनलाई इन्धन उपलब्ध गराएको थिएन । यसैगरी, निगमले बाह्य विमान कम्पनीका लागि इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर ९८१ डलर कायम गरेको छ । यसअघि १५३० डलर प्रतिकिलो लिटर रहेको बाह्यतर्फको मूल्य समायोजन गर्दा प्रतिकिलोलिटर ५४९ डलर घटेको छ ।
Prevप्रजातन्त्र आएको ६५ वर्ष नाघ्यो, खै जनताको आर्थिक समृद्धि ?
Nextसुनको भाउ : साताभर उतारचढाव, आइतबारकै भाउमा कारोबार